Xaaladda dhaawacyadii la geeyey Turkiga, nooca dhaawac iyo daryeelka ay heleen + Magacyada - Caasimada Online
Home Warar Xaaladda dhaawacyadii la geeyey Turkiga, nooca dhaawac iyo daryeelka ay heleen +...
Xaaladda dhaawacyadii la geeyey Turkiga, nooca dhaawac iyo daryeelka ay heleen + Magacyada
Ankara (Caasimadda Online) – Safaaradda Soomaaliya ee Anakara Turkey ayaa mid mid usoo booqatay dhaawacyada qaraxii Zoob ee lagu dabiibayo Magaalada Ankara.
Guud ahaan Bukaanada waa 34 Bukaan waxay ku jiraan oo loo kala qeybiyay ilaa iyo lix Isbitaal, Safaaradda Soomaaliya ayaana shacabka Soomaaliyeed la wadaagtay qeybta ugu horeyso warbixinada dhaawacyada, waxayna soo gudbisay xogta 18 Bukaan.
Cabdulqaadir Maxamed Xuseein (Barqadle) oo ah Xoghayaha labaad ee Safaaradda Soomaaliya Turkiga oo ay u xilsaartay ka warqabka xaaladda bukaanadaan ayaan ka helnay warbixintaan.
Cabdulqaadir ayaa si dhow uga warqabo xaaladaha caafimaad ee dhaawacyadaas, waxaana loo xil saaray inuu dhaawacyada la socdo xaaladahooda, u fududeeyo waxyaabaha ay u baahan yihiin isla markaasna uu ka caawiyo sidii ay u heli lahaayeen daryeel Caafimaad oo dhameystiran.
Xogyahaya labaad ee safaaradda Cabdulqaadir ayaa si joogto ah u booqdo dhaawacyadaas oo la kala geeyey Isbitaalo kala duwan.
Wuxuu Cabdulqaadir Caasimadda la wadaagay 18-kaas bukaan dhaawacyada ay qabeen, shaqada loo qabtay, Xaaladda ay hadda ku sugan yihiin iyo cidda la socoto:
14) Layla Isaak Mohamed, Xaaladeeda caafimaad aad ayay u wanaagsantahay jirkeeda oo dhan waa uu bad qabaa marka laga reebo gacanta bidix oo ay dhaawac ka tahay waxa ay mareysaa qaliin gacanta ah, waxaa la socoto Fadumo Omar.
15) Samiira Sheikh Mohamed waxa ay dhaawac katahay garabka midig waxaa kaloo jiro dhaawac yar oo bowdada ah mana ahan waxweyn, Samiira plastic operation ayay mareysaa oo xagga garabka ah xaaladeeduna aad ayay u wanaagsantahay, waxaa la socdo Aweys Sheikh Mohamed.
16) Calas Cilmi Qoobeey, Koomadii uu ku jiray waa uu ka soo baxay, waxa ay wax ka gaareen madaxa labada lugood iyo daanka, Ogaalkiisu aad ayuu u wanaagsanyahay, wax wuu arkayaa waxna waa uu maqlayaa dadkana waa uu kala garanayaa operationkiisiina waa lagu guuleystay waxaa hore ula joogay Aidrus Mohamed waxaa ku soo biray oo Finland ugu yimid walaalkiis Daahir Cilmi Qoobeey.
17) Mohamed Ismail Malaq, Hadda waxaa laga soo saaray qeybta degdega waxaa la keenay qeybta jiifka caadiga ah, waxa ay wax ka gaareen dhabarka, lafdhabarta aad ayay u badqabta, socod ayuu bilaabay sifiicanna ayuu noogu sheekeeyay maanta, xaaladiisa aad ayay u wanaagsantahay, waxaa lajoogo walaalkiis Cabdulqaadir Ismail Malaaq.
18) Liibaan Nuur Osoble, kaliya waxa ay wax ka gaareen madaxa, Operationkiisii waa lagu guuleestay, kaliya inuu si caadi ah u soo kaco ayaa la sugayaa, dareen iyo dhaqdhaqaaq waa uu leeyahay rajo fiican ayaa laga qabaa inuu soo tooso, waxaa la socdo Cabdulqaadir Cabdullahi.
Waxaa dhiman ilaa 16 dhaawacyada, wuxuu xoghayaha labaad ee safaaradda Soomaaliya ee Turkiga cabdulqaadir sheegay inuu caawa soo gudbin doono? Waxaana idiin ballan qaadeynaa inaan idinla wadaagno marka aan xogtaas ka helno Inshaa Allah